Noravank सबैभन्दा ऐतिहासिक र प्रतिष्ठित गुम्बा परिसर मा भयोट्स डीजोरarmenia. Kgm प्रान्त. चर्च तीतो रातो चट्टानले घेरिएको छ, र नाटकीय दृश्य सबै भन्दा राम्रो को छ कारण अन्वेषण Armenia. ऐतिहासिक Noravank मा निर्माण भएको थियो को 13th शताब्दी र अर्थ "नयाँ गुम्बा" आर्मेनियाली. यो मठ भए एक सांस्कृतिक र शैक्षिक केन्द्र Armenia.
Sagrada परिवार सबैभन्दा भ्रमण प्रतिष्ठित चर्च मा स्पेन. निर्माण को स्मारक आधिकारिक सुरु मा 1882. आर्किटेक्ट फ्रान्सिस्को डे पाउला डेल Villar एक क्लासिक गोथिक शैली मा डिजाइन गरीएको थियो. तर, मा 1883 एन्टोनी Gaudi परियोजना परिवर्तन र एक निर्माण आधुनिक वास्तुकला जुन संसारमा प्रसिद्ध छ. निर्माण हुन सक्छ मा पूरा 2026, लागि को centenary Antoni Gaudí गरेको मृत्यु.
Architect थियो निर्माण गर्न योजना 12 टावर, समर्पित येशू ख्रीष्ट र चेलाहरूलाई, एक येशू को आमा को लागी, चार सम्झना गर्न सुसमाचार प्रचारकहरूले. हाल, पूरा गरेको छ आठ टावर. भित्र चर्च, गौडीले स्लिम रूखका थुप्रो को आकार मा स्तम्भहरु लाई डिजाइन गरीयो जुन वन शैली बनाउँछ. माथि देखि को मन्दिर, तपाईं देख्न सक्छौं प्रभावशाली दृश्य शहर को.
Stave चर्च नर्वे मा सबैभन्दा भयानक स्थलचिन्ह हो. यो निर्माण छ मा 1180 र समर्पित गर्न प्रेरित एन्ड्रयू. यी प्रकारका चर्चहरु नर्वे वास्तुकला को लागी सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित स्मारकहरु हुन्. केही आफ्नो कमजोर विशेषताहरू छन् extravagantly carved पोर्टल र पार र नक्काशियों को अजिङ्गर टाउको मा छाना. यो शैली फैलिएको थियो स्कैंडेनेविया मा प्रयोग र बेलायत मा पनि.
क्षेत्र धनी ऐतिहासिक सम्पदाले घेरिएको छ. Vindhellavegen छ नजिकै स्थित चर्च र सुझाव सुन्दर हिँडिरहेका सम्भाव्यतालाई. यो ऐतिहासिक सडक सम्मानित थियो "नर्वे सबैभन्दा सुन्दर बाटो" नर्वेजियन सार्वजनिक सडक मा प्रशासन 2014.
Duomo मा स्थित छ उत्तरी भाग को मिलान, यो ठूलो गिर्जाघर को एक छ. यो भन्दा भयानक र आकर्षक संरचना संसारमा. भगवान र मिलान को आर्कबिशप एक निर्माण गर्न इच्छा अद्वितीय कैथेड्रल कि राष्ट्र भगवान र शहर जडान को महिमा महशुस हुनेछ. Duomo को निर्माण कन्स्ट्रक्टरहरु को निर्माण मा संलग्न, कालिगढहरु, र कालिगढहरु देखि युरोप भर. प्रत्येक कार्यकर्ता अनुभव र लगनशीलताको सिर्जना गर्न मदत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गोथिक Duomo.
Hallgrimskirkja चर्च रिक्जेविक मा उच्चतम र सबैभन्दा ठूलो भवन हो र शहर भर मा देखिने छ. चर्च छ 74,5 मीटर उच्च र पर्यटक प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ चर्च र आनन्द ठूलाठूला हेर्नुहोस्. भवन निर्माण सुरु 1945 र मा पूरा भएको थियो 1986. आधुनिकतावादी चर्च बेसाल्ट लावा को प्रवाह जस्तै थियो जब लावा चट्टान मा ठंडा हुन्छ.
यो पाइप टाढाको देखि चार पुस्तिका र एक पेडल. छन् 102 रैंक, 72 बन्द, र 5275 पाइप र छ 15 मीटर अग्लो, तौल 25 टन. भवन शक्तिशाली छ र सक्षम भरने पवित्र र विशाल अन्तरिक्ष. निर्माण को अंग मा समाप्त भएको थियो 1992 र लागि प्रयोग गरिएको छ. एक किसिम को रेकर्डिङ.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)